विचार Archives - Rapti Press
७ साउन २०७८, 12:48 am
विश्वराज आचार्य ब्यबस्था परिबर्तन चुनाब बाट हुन्छ ? अझ श्रमजिबी किशान मजदुरको पक्षमा काम गर्ने ब्यबस्था चुनाब बाट संभब छ ? कम्युनिस्ट हरुको लागि चुनाब कार्यनिती हो कि रणनिती ? समजवाद केहो ? समाजबादमा समाजको…
संयुक्त सरकारलाई माओवादी दाङका प्रभावशाली युवा नेता विश्वराज आचार्यकाे यस्ताे…
६ साउन २०७८, 3:00 am
विश्वराज आचार्य हामी कम्युनिस्टहरु द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी हौं । एकको दुई मा बिभाजन र बिपरितबीचको एकत्व भन्ने गर्दछौं । नेपालीको आफ्नै भनाइ पनि छ एक सिक्काको दुई पाटा, सँगै सेते लात्ता लाग्छ। बुढा पाकाको भनाइ सुन्दा…